Ukuhlonishwa kwegceke/kwebala – iAfrika
Ekhasini lokuqala sindlelele ngendaba yokuhlonishwa kwesibaya nokuthi akugcini nje ebantwini kuphela, kepha isandla senhlonipho sedlulela ngisho ezilwaneni kanye nasekhaya uqobo. Kulelikhasi ke siyenaba ngokuhlonishwa kwegceke.
Umuzi uyahlonishwa, amanzi awasakazwa nhlobo egcekeni phambi kwezindlu njengoba lokhu kuthiwa kumema izulu egcekeni uma liduma, kepha achithwa ngemuva kwezindlu noma othangweni nakhona awasakwa nhlobo kodwa ngesineke nangesinono sekati.
Ukuziphatha komlobokazi egcekeni
Uma ke kuhlatshiwe abalobokazi bakuloyo muzi abalubhadi bahambe phambi kwezindlu kepha bahamba ngemuva kwezindlu. Kanti ke nayo intombi uma iqomile ayihambi nhlobo phambi kwezindlu kepha ihamba ngemuva ize ifike elawini la elibhekise khona. Akuvumelekile ukuthi ime egcekeni, ngisho kade iyotheza ihamba nezimpelesi zayo, ithi ingabuya ehlathini iguqe ngamadolo uma ifika esangweni bese kuthi izimpelesi zayo zona zingene nemyaba leyo ebiyothezwa ziyoyibeka.
Kanti ke futhi umlobokazi akavunyelwe nhlobo ukuthi abange umsindo egcekeni noma amemeze, uma kukhona akudingayo uncamela khona ukuthi athume ingane. Sisekuyo indaba yengane, umakoti akavunyelwe nhlobo ukushaya ingane egcekeni, kepha uphuma ngaphandle uma efuna ukuqondisa igwegwe enganeni.
Tags Ibala, Igceke, Inhlonipho, Izindlu
1 thought on “Ukuhlonishwa kwegceke/kwebala”
Ngicela izithakazelo zakwaKhawula nomlando wakhona